Wararka Maanta: Khamiis, July 11, 2013-Siyaasiyiin Reer Somaliland ah ku dhawaaqay Gole Qaran oo lagu Toosinayo Xukuumada, Buuxinayana Kaalintii Mucaaradka
Khamiis, July 11, 2013 (HOL) — Siyaasiyiiin reer Somaliland ah oo shalay ku dhawaaqay gole oo la magac baxay golaha madaxa banaan ee wadatashiga iyo Toosinta Qaranka, kaas oo ka shaqayn doono inuu xukuumadda ku haggo wadadda toosan.
Golaha ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku soo bandhigeen qodobo ay ku dhaliilayaan xukuumadda, taas oo ay sheegeen inay ka leexatay wixii lagu doortay ka dibna ay siyaasiyiintan la noqotay inay sameeyaan gole cusub oo toosiya, maadaama oo mucaarad dalka ka jirin.
Afhayeenka Golahan Madaxa Banaan ee Wadatashiga iyo toosinta Qaranka oo ah Ibraahim Cabdilaahi Xuseen (Dhagoweyne) ayaa sheegay in 16 arrimood darteed markii ay arkeen ay la noqotay inay golahan ku dhawaaqeen, kaas oo ay u arkeen inay khatar ku jirto madax banaaniddii Somaliland, waxaana ka mid ahaa qodobadan:
“Kaddib markii aanu aragnay:
Xalaada guud ee dalku maraayo
Gooni isutaagii iyo qadayadii madaxbanaanida Somaliland oo madmadow la geliyay, isla markaasna dalkii go’doon laga geliyay beesha caalamka.
Balanqaadyadii ay xukuumadda ku gashay xilligii ololaha doorashada madaxtooyadda ee 2010 oo aan intoodii badnayd la fulin ama la hirgelin.
Eexdii, qabyaaladdii, musuqmaasuqii iyo hantiboobkii oo maraaya meel aan hore loo arag abid.
Hantidii ummada iyo awoodii dowladnimo oo loo isticmaalaayo in lagu furfuro laguna kala qeybiyo midnimadda shacabka Somaliland laguna cabudhiyo saxaafadda madaxabanaan iyo Xisbiyaddii qaranka.
Taladii dalka oo gacanta u gashay shakhsiyaad aan loo igman oo dano gaar ah leh oo runtii aan dalka iyo dadka toona midna u tudheynin.
Sida ay isku-milmeen xukuumaddii, golayashaashii sharci dejinta, iyo garsoorkii qaranka halkaas oo ay ku luntay isku-dheelitirkii awoodeed ee dalka
Aragnay wax ka qabasho la’aanta cabashooyinka beelaha iyo weliba isku-dhacyadda dhexmara.
Niyadjabka, shaqo la’aanta, quusta, rajo xumada, iyo tahriibta ku habsatay ummadii Somalilandguud ahaana, gaar ahaana dhallinyaraddii lafdhabarka u ahayd dalkan.
Sida dastuurkii iyo shuruucdii dalkani lahaa loogu tumanaayo.
Wadatashigii & isku tanaasulkii ay Somaliland ku soo caano maashay intii ay jirtay oo loo bedelay in aan la isku joojin.
Beelihii darafyadda oo ka maqan dhadhaaradii taladda dalka iyo awood qeybsigii.
Caadaalad daradii oo si weyn ugu baahday dhamaan dalkii oo dhan iyo go’aanadii maxkamadaha oo aan la fuluneynin.
Ilihii dhaqaale ama dakhliga sida dekadda, haamaha shidaalka, macjarkii, hey’adii wadooyinka, dayactirka, lacagtii gurmadka, 2% loo qoondeeyay horumarka goboladda bariga oo si toos loo hoos geeyay madaxtooyadda iyada oo dano gaar ah loo isticmaalo.
Dhaqaalaha ka soo gala dalka kheyraadka dabeeciga ah sida shidaadlka, macdanta, kalluunka,iwm. oo si gaar ah loogu takri falaayo heshiisyadoodana aan la soo marin baarlamaanka
Dhimashadii, dhaawicii, dildilaaci, riiqdii, qeybsanaatii, qabyaaladii ay inaga tagtay doorashadii golaha deegaanka (28/11/2012) ee xukuumada SL musuqmaasuqday ayay ku sheegeen war-saxaafadeedka waxaanay gunaadkiina soo jeediyeen:
“Haddaba, isku soo wada duuboo markii aanu araganay in dalka halis ku jiro oo cagta saaray tubtii ama dhabihii ay dowladuhu ku burburi jireen ayaa wada tashi dheer oo ka dhacay dalka gudihiisa iyo debediisaba lagamamaarmaan noqotay in loo midooba sidii loo badbaadin lahaa jiritaanka Qaranimadda . Sidaasi awgeed waxa abuurmay gole madaxbanaan oo la magac baxay (GOLAHA MADAXBANAAN EE WADATASHIGA IYO TOOSINTA QARANKA). Waxa la isla gartay in sida ugu dhakhsiyaha badan leh loo qabto Dood Cilmiyeed lagu lafo guraayo laguna dersaayo xal u helida dhibaatooyinka iyo caqabadaha faraha badan ee inna horyaala si loo helo Midnimo Qaran.”
Si kastaba ha ahaatee, golahan waxa ku midoobay siyaasyiin bulshadda dhexdeeda laga ixtiraamo, isla markaana aan ku jirin xisbiyada mucaaradka, haseyeeshee waxay arrrintani xasaasiyad weyn ku abuuri doontaa xukuumadda, maadaama oo ay buuxin doonaan kaalintii xisbiyadda mucaaradka ah oo baryahan dambe la moodo inay xukuumaddu gacanta ku dhigtay xisbiyadii mucaaradka ahaa, marka laga reebo xisbiga UCID oo ku kaliyeystay mucaaradka, taas oo maalmihii u dambeeyey ay hawadda isku mariyeen eedo ay iswaydarsanayaan gudoomiyaha Ucid iyo xubno wasiirada ka tirsan.